नेवारहरूद्वारा मनाइने चाडपर्वहरू मध्ये एक, बिस्केट जत्रा
The nine-day long Bisket Jatra is celebrated every year and starts four days prior to the Nepali New Year’s Day.
यस पटक त्यहाँ पुरानो-पुरानो उत्सवको कुनै समारोहहरू छैनन्, त्यसैले म तपाईंलाई मान्छेहरू स्मृति लेन तल लैजाँदैछु।
यो २०१ 2013 मा फर्किएको थियो जब मैले बिस्केट जात्रालाई पहिलो पटक ताउमाथी स्क्वायर र दत्तात्रेय स्क्वायरमा भएको घटनाको प्रत्यक्ष साक्षीको रूपमा हेरेको थियो।
यहाँ के भएको छः
यदि म यो भन्छु भने म खराब अवस्थामा पर्न सक्छु, तर मैले कहिले पनि कुनै पनि नेपाली चाडपर्व वा अन्य कुनै देशको भाग लिनु चाहेको छैन। मलाई त्यस्तै चाडपर्वहरूमा मात्र चासो लागेको थियो जब म ब्यान्डमा थिए र हामीलाई काठमाडौंको केही उत्सवहरूमा खेल्न भनियो। भक्तपुर नआउन्जेल र संसारभरका संस्कृति र परम्पराको अनुभव गर्ने अभिलाषा भएका राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूसँग भेट नगरुन्जेल मलाई चाडपर्वहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा जान्न कहिल्यै रुचि थिएन। र मैले मेरो प्रश्नको उत्तर फेला पारे: त्यो चाडमा वास्तवमा के हुन्छ? मैले यस बारे लेख्ने निर्णय गरें।
नौ दिन लामो बिस्केट जत्रा प्रत्येक वर्ष मनाइन्छ र नेपाली नववर्ष दिन भन्दा चार दिन पहिले सुरु हुन्छ। यद्यपि यस वर्ष २०२० मा यो उत्सव नेपाली नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने थियो, तर कोरोनाभाइरस (कोभिड -१)) नेवारहरुलाई आफ्नो महत्वपूर्ण चाडहरु रद्द गर्‍यो। यसमा महामारीले मानिसहरूलाई यस बर्षको महत्त्वपूर्ण जीवन घटनाहरू रद्द गर्नमा कुनै आश्चर्य छैन। अगाडि बढ्दै, त्यो उत्सव भक्तपुरमा रहेको गुथी संस्थान (नेवारहरूको एक सामाजिक संगठन) द्वारा व्यवस्थापन गरिन्छ। मूलतः यो साँपको मृत्युको उत्सव हो जुन देवी भद्रकाली र भगवान भैरवको रथ मन्दिर जुलुसबाट सुरु हुन्छ। 'Yeo-sin-deo' पोल चौथो दिनमा खडा गरीयो र पाँचौंमा कम भयो। 'येओ-पाप-देव' पोल सन्दन काठबाट बनेको काठबाट काठमाडौंको १ 14२ माईल दक्षिणमा रहेको मकवानपुरबाट सबै ठाउँमा ल्याइएको थियो। छैठौं र सातौं दिनमा देवी महालक्ष्मी र भगवान महाकाल, ब्रह्मायनी र भगवान गणेशको रथ मन्दिर जुलुस हुन्छन्। पुजारीहरू भेला हुन्छन् र चाडमा आउने देवताहरूको लागि प्रार्थना र बलिदान चढाए पछि चाडको अन्त्य हुन्छ। गुठी सदस्यहरूले चाडको लागि सबै आवश्यक तयारीहरू एक महिना अघि सुरु गर्दछन्।
ताउमाधी स्क्वायर © फ्लिकर
धेरै समय अगाडि भक्तपुरकी तत्कालीन राजकुमारीसँग विवाह गर्ने राजकुमारहरू हनिमूनको रातमा नै मरेका थिए र यसले देशभर आतंक फैलाएको थियो। यो रहस्यको समाधान हुन सकेन जब सम्म एक बुद्धिमान राजकुमारले उठ्ने निर्णय गरेनन् र राजकुमारहरूको क्रूर मृत्युको कारण पत्ता लगाएनन्। केही दिन पछि उनले राजकुमारीसँग विवाह गरे। हनीमूनको रातमा, उहाँ राजकुमारी सुतिन्जेल निद्रामा रहनुभयो र त्यसपछि उनले दुई विशाल सर्पहरू देखे जसलाई राजकुमारीको नाकबाट * क्रल गरिरहेको थियो। राजकुमारले आफ्नो तरवारले सर्पको टाउको काटिदिए र भोलिपल्ट सबैलाई हेर्नका लागि एउटा पोलमा उनीहरूलाई प्रदर्शन गरे।
अब मैले बुझें! पर्वमा पोलमा बाँधिएका रिबनहरूले सर्पहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। ध्रुव र यससँग जोडिएको दुई झण्डाले सर्पलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ जुन मिथकको विशेषता हो जसमा त्यो चाड स्थापना भएको हो।
यो कहिले र कहाँबाट सुरु हुन्छ?
१० अप्रिल, बुधवार, केही साथीहरूले तामाधी स्क्वायरको अवलोकन गर्न मलाई नमस्ते क्याफेमा निम्तो दिए, जहाँ चाडपर्व सुरु हुन्छ। हामी त्यहाँ फेस्टिवलको बारेमा केहि पनि ज्ञान बिना नै गयौं, लगभग 4.. at० बजे, दिउँसो अपराह्न र भीडभाडिएको वर्ग र केही चाखलाग्दो व्यक्तिको केही तस्बिर लिएका छौं (मलाई पक्का विश्वास छ कि त्यहाँ एक जना मानिस थिए जो एक सुपरम्यान टी-शर्टमा पहिरिएका थिए। !)। करिब २० फिट अग्लो रथ मन्दिरको चार वटा ठूल्ठूला पा whe्ग्राहरू थिए र ती दुवै पट्टि मोटो डोरीले बाँधिएको थियो। मैले सोचें कि त्यहाँ एउटा दौड वा केहि चीज हुनेछ र म सही थिएँ। त्यहाँ दुईवटा टुप्पोहरूमा डोरीका छेउमा मानिसहरूका दुई समूह थिए र कोही रथमा थिए जुन झण्डा र मूर्तिमा बाँधेर अझै सजावट गर्दै थिए। मलाई जे भए पनि त्यसको बारेमा खास चिन्ता छैन। मलाई बस्न र कुर्नु पनि लोभिएन जब सम्म यो शुरू भएन। त्यसैले मैले मेरा साथीहरूलाई त्यहाँ छाडिदिएँ र हामी बसेको ठाउँमा फर्कें, उनीहरूले दुबै कुनाबाट रथ तान्न केही मिनेट अघि।
पछि, साँझ7बजेतिर, मेरा साथीहरू फर्किए र मलाई भने कि दौड सुरु भएको छ र रथ यस बाटोबाट आउँदैछ किनकि यस पक्षका मान्छेहरू बलिया थिए। के भएको थियो, तिनीहरूले दुबै छेउबाट रथ मन्दिर तान्न थाले र दुबै छेउमा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई तानिरहेका थिए, यो कतै अडियो थियो, जहाँ हामी बसेका थियौं। हामीले बसिरहेको स्थानको छेउछाउको साँघुरो बाटोमा रथको मन्दिर आउन हामीले कुर्ने निर्णय ग .्यौं।
बिहानको १ मा, हामी एउटा हल्लाबच्ची सुने र विन्डोजमा आइपुगे र लो! हाम्रो शयनकक्षको झ्यालको बाहिर दत्तात्रेय स्क्वायर तर्फ चार्ज हुँदै विशाल रथ मन्दिर थियो। त्यहाँ धेरै मानिसहरूले डोरीहरूद्वारा रथको मन्दिर तानिरहेका थिए र भीडलाई नियन्त्रण गर्न दंगा गियरमा करीव policemen० प्रहरीहरू थिए।
के तिनीहरू सम्पदा साइटहरू नष्ट गर्ने बारे ख्याल राख्छन्?
रथ मन्दिर घरहरू बीचको साँघुरो बाटोमा अडिग थियो तर त्यसले ठूलो भीडलाई अगाडि बढ्नदेखि रोक्न सकेन र हाम्रो अगाडिको दुई तलाको दोस्रो तलामा रहेको बालकनीलाई ध्वस्त पार्‍यो। मानिसहरूले आक्रमक रूपमा एक अर्कालाई सराप्दै थिए र रथको मन्दिरको कसम खाइरहेका थिए र यसलाई सकेसम्म कडा तानेका थिए, उनीहरूले नष्ट गर्ने सामानको वास्ता गरेनन्। एक साथीले उद्गार गरे, 'यो मैले देखेको पागल चीजहरू मध्ये एक हो!' र मैले जवाफ दिएँ, 'यो मेरो जीवनमा मैले देखेको सबैभन्दा पागल चीज हो!' तर तपाईं केवल त्यसबेला देख्नुहुन्छ, र मैले कहिले पनि देखेको छैन। पहिले जस्तो केहि देख्यो। तर भविष्यमा, म गर्नेछु!
अझ खराब कुरा गर्न, तिनीहरूले रथको मन्दिर यति कडा तान्यो कि त्यसले मुख्य बिजुलीका तारहरूलाई हान्यो र त्यहाँ ठूलठूला स्पार्कहरू उडिरहेका थिए। तारहरू बल्न थाले र भक्तपुरभर बिजुली थिएन। तारहरू केहि समयपछि बल्न रोकिए र अन्ततः हामी सुरक्षित महसुस गर्‍यौं।
जब रथको मन्दिर जस्तो देखिन्थ्यो कि हामी घरभित्र पस्दै थियौं, तब मैले आँगनबाट काठको काठ ल्याएको छु। काठको प्रयोग गरेर मैले रथको मन्दिरलाई बिजुलीको तारबाट टाढा धकेल्ने प्रयास गरें, तिनीहरूलाई काट्नबाट जोगाउन, तर म यसलाई कुनै हालतमा सार्न सकेन, स्पष्ट छ। तर रथ मन्दिरले हाम्रो भवनको कौसी वा त्यससँग सम्बद्ध कुनै चीज पनि छुने छैन (सडक बाहेक)।
यदि उनीहरूले यसलाई दत्तात्रेय स्क्वायर तर्फ झिक्ने थिए भने, तिनीहरूले मन्दिरको छतलाई चोकको प्रवेशद्वारमै ध्वस्त पार्ने थिए। तर भाग्यवस, पुलिसले उनीहरूलाई रोके र अर्कोपट्टि रथ तान्न थाल्यो र अर्को घरको बालकनीमा ठोक्किनु अघि उनीहरू ताउमाथी स्क्वायर तर्फ अघि सारे, जहाँ यो सबै सुरु भएको थियो। यो बिहान २.4545 भैसकेको थियो, रथ मन्दिर हाम्रो बाटोमा फर्केर आउने कुनै संकेत नभएकोले हामीले केही निद्रा लिने निर्णय ग .्यौं। त्यसपछि हामी ओछ्यानमा गयौं। हामीले बिहान पत्ता लगायौं कि दौड बिहान3बजे रोकियो र spot० मिटर तौमाधी स्क्वायरपट्टि स्पटमा रोकिदियो।
बिस्कट जत्राको पहिलो दिनको यो मेरो अनुभव हो, जसको बारेमा मैले पहिले पनि जान्न चाहेको थिएन, तर मैले यसबारे जान्न चाहेको भनेको होइन, जुन मैले रथयात्रामा बिहान १ बजे देख्ने निर्णय गरिसकेपछि। बिहान केही साथीहरूसँग र उत्सुकता बढ्दै गएको, मैले नेपाली नववर्ष २०70० बिर्सें जुन तीन दिनमै हुने थियो, जुन पक्कै पनि मेरोलागि कहिल्यै अवसर बनेन र कहिल्यै पनि हुनेछैन। उक्त अखबारले दुई व्यक्तिको मृत्यु र नौ जना घाइते हुने घोषणा गरेको छ। अवश्य पनि, महिलाले भाग लिएनन्। म यहाँ जीभ छेड्ने परम्पराको पनि उल्लेख गर्न चाहन्न। म सबै विवरणहरू मार्फत जान पनि चाहन्न। :)
सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था : विगत र वर्तमान...
८ महिनाको शिशु पेटमा बोकेर १४ वर्षीय किशाेरी न्ययाको खोजीमा...
जर्मनीको ह्यामवर्गस्थित बर्गेडोर्फमा विष्टले खड्कालाई बन्चरो प्राहर गरे...
बजारमा अधिक तरलता भएपछि ५० अर्ब उठाउँदै राष्ट्र बैंक...
अछाममा बस दुर्घटना : एकको मृत्यु, १७ घाइते...
५ दिनदेखि बेपत्ता १७ वर्षीया युवकको शव झाडीमा फेला...